Nirefodrefotra ny basy tao Toamasina: olona iray maty, polisy iray naratra mafy, dimy voasambotra | NewsMada
Nitrangana fanafihan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika tao Toamasina, omaly tamin’ny 12 ora sy 30 mn. Raha vao nahaheno izany ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany Tanambao Faharoa notarihin’ny kaomisera Rakotovao Christian, tonga haingana teny an-toerana.
Nisy, araka izany, ny fifandonana teo amin’ny polisy sy ireo andian-jiolahy. Nahery vaika ny fifandonana ka jiolahy dimy indray azo sambo-belona raha olon-tsotra iray kosa notifirin’izy ireo. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany hatrany, nisy polisy iray naratra voatifitr’ireo jiolahy teo amin’ny sandriny. Nisy olona iray tsy manan-tsiny notifirin’ireo jiolahy ireo satria tsy nety hitondra azy ireo hitsoaka amin’ny fiara. Mpandraharaha iray avy any Mananara Avaratra tonga haka vola tao amin’ny banky iray eo amin’ny araben’ny Fahaleovantena ao Toamasina no notafihin’ireto jiolahy ireto. Efa nahazo loharanom-baovao roa andro mialoha anefa ny polisy momba ity fikasan-jiolahy hanafika ity mpandraharaha ity. Nametraka ny paikady mialoha, araka izany, ny polisy eo anivon’ny kaomisaria handravana ity fanafihan-jiolahy ity. Efa nipetraka teny amin’ny manodidina ny toerana voalaza fa hakan’ilay mpandraharaha ity volabe ity ny polisy. Tonga tokoa ilay mpandraharaha haka vola 20 tapitrisa Ar tao amin’ilay banky. Mody nandeha posy anefa izy nihazo araben’ny Fahaleovantena hiafenana hoe mitondra volabe izy. Tampotampoka teo, nisy nitifitra tampoka ilay mpandraharaha, saingy tsy nahavoa azy izany fa nahay niala izy. Lasan’ireo jiolahy ny vola tamin’ny sakaosy. Nanomboka teo, tsy nifandrenesanany poa-basy satria efa teo amin’ny manodidina teo ny polisy.
Gadra vao nivoaka ny fonjan’Ihosy…
Nifamaliana ny tifitra, saingy tsy nihemotra ireo polisy na nandalovan’ny bala aza ny polisy iray. Nikoropaka avy hatrany ireo jiolahy samy nitady lalana hitsoahana. Efa voahodidina polisy anefa teny amin’ireo lalana nalehan’ireo jiolahy. Jiolahy iray saika handositra tamin’ny fiara 4×4 iray sendra nandalo avy nitsena mpianatra ka ilay raim-pianakaviana teo anoloana no notifirin’ilay jiolahy. Maty tsy tra-drano ilay raim-pianakaviana. Voabahan’ny fitohanan’ny fiara anefa izany ka tsy afa-nandeha ny fiara. Niezaka nitsoaka ihany koa ny jiolahy iray nitondra basy. Bajaj iray no nambanany basy hahafahany mitsoaka, saingy tratran’ny fitohanan’ny fiara teo amin’ny sampanan-dalana mihazo an’i Bazaribe ka tsy afaka ihany koa. Niafarany, nitsoaka nandeha an-tongotra ry zalahy ka mora tamin’ireo polisy ny nitsimpontsipona azy ireo tao Anjoma. Basy PA iray sy bala telo tratra tany amin’izy ireo. Nanamafy ny polisy fa mbola misy jiolahy hafa naman’izy ireo karohina ao amin’ny fokontany Ambalankisoa. Omaly hariva, raikitra ny savahao nataon’ny polisy tao amin’ity fokontany Ambalankisoa ity. Tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony kosa ny vola 20 tapitrisa Ar niaraka amin’ireo firavaka volamena. Nambaran’ny polisy fa gadra vao nivoaka ny fonja avy any Ihosy ny iray amin’ireo jiolahy tratra ireo.